Istaraatijiyadaha Ganacsi ee 140 astaamood ama kayar | Martech Zone
Istaraatijiyadaha Ganacsi ee 140 Calaamadood ama ka yar
Twitter-ka ayaa dib u bilaabay Xarunta ganacsiga oo lagu daray fiidiyow cusub, oo cajiib ah. Waan jeclahay farriinta iyo naqshadeynta garaafka - waxay sawir noocan oo kale ah ka bixineysaa Twitter-ka iyo sida ganacsatadu ay ugu adeegsan karaan aaladda waqtiga dhabta ah si loo helo, looga jawaabo loona dhiirrigeliyo ganacsigooda.
Waxyaabaha aasaasiga ah waxaa ka mid ah ku xirnaanshaha dadka saxda ah, wax badan ka ogow cidda ku jirta Twitter iyo sida loo gaaro, la fahan natiijooyinkaaga Analytics, ku dar dadaalkaaga suuq-geynta badhamada Twitter-ka iyo Tweets gundhig ah, kor u qaad dadaalkaaga si aad u kordhiso saameyntaada
natiijooyinna ku hel xeelado iyo xeelado dhiirrigelin oo guuleysi leh.
Twitter wuxuu liis gareeyaa xeelado yar oo ganacsi ah si ay u qaataan istiraatiijiyadooda Twitter heer sare:
Tartanada & qoob-ka-ciyaarka - Bartilmaameedka bartilmaameedsadayaasha, iyaga xiisayso, ka qayb gal tartan halkaas oo ay dib ugu soo diraan una ballaadhiyaan gaadhista dhagaystayaashaada.
Jawaabta tooska ah - U adeegso kootooyinka kor loo qaaday ee lagu bartilmaameedsanayo dhagaystayaasha gaarka ah isla markaana loo jiheeyay aag gaar ah si loo kobciyo kuwa soo socda. Kajawaab oo caawi caawimadaada soo socota.
Flock si aad Unlock - Raaciyayaashu waxay faafinayeen farriinta iyaga oo dib ugu soo celinaya dalabkii, tiro cayiman oo Retweets ah ka dib, waxaa lagu abaalmariyay qiimo dhimis.
Partnership - Ku soo biir xoogagga leh saamileyaasha si aad u ballaadhiso farriintaada oo aad ugu yeerto wacitaan ficil oo kala duwan.
Soosaarida alaabada - U adeegso Xisaabaadka La Kordhiyey si aad u soo jiito kuwa raacsan oo cusub iyo isku darka Tweets-ka La Kordhiyey iyo Isbeddellada La Kordhiyey si ay ula galaan taageerayaasha xiisaha leh.
Twixclusive - Ku billow hal maalin oo iibsi toos ah bogga Twitter. Ku xooji iskaashi lala yeesho sabab halka qayb ka mid ah dakhliga lagu deeqi doono.
U adeegso dhacdooyinka si aad uga qayb gasho - Kooxda ka kooban Twitter-ka iyo barnaamijyada waxay abuuri karaan waaya-aragnimo habeysan si kor loogu qaado dhacdadaada.
Tags: kor u qaaday tweetsisticmaalayaasha la dalacsiiyayTwitterxayeysiinta twitterDhacdooyinka twitterSuuqgeynta Twitterxeeladaha suuqgeynta twittertwitter ayaa kor u qaaday tweetsxeeladaha twitterxeeladaha twitter
Xigashooyinka iyo Xusuus-qorista loogu talagalay SEO-ga maxalliga ah